Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 ichasvika mu5 mavara | IPhone nhau
Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 ichasvika mu5 mavara
Kusvikira iyo iPhone 5, chishandiso chakasvika muna2012, Apple yakatanga mafoni ayo mune nhema uye chena. Yakanga iri chaiyo iyo iPhone 5 iyo yakaita kuti Apple ishandure yayo yakasviba iPhone uye kuvhura iyo iPhone 5s mune space grey, chimwe chinhu chayakaita gore iro rakaburitsawo iPhone mugoridhe. Mwaka wadarika, Tim Cook nekambani vakaburitsawo maApple 6s mu rose goridhe. Kubva pakuonekwa kwayo, gore rino, mune angangoita mavhiki maviri nguva, Apple ichaunza a iPhone 7 mune ruvara rutsva.
Ruzivo rwunouya kwatiri muchimiro chemufananidzo, chidiki kwazvo. Icho chifananidzo chitsva ndicho chiri kurudyi kwevaviri vanotungamira chinyorwa ichi uye chinoratidza 5 trays yeSIM kadhi ayo anowanikwa mu mavara mashanu: sirivheri, nzvimbo grey, yakasimuka goridhe, goridhe uye, iyo yakasara kuruboshwe, yakasviba nhema nhema iyo inotiyeuchidza nezve iyo nhema iyo iyo iPhone 4 kana iPhone 5 yaivepo.
Hutsva humbowo hweiyo nhema nhema 7
Mufananidzo wacho wave rakabudiswa nepakati japanese Mac Otakara. Kusiyana nedzimwe midhiya senge DigiTimes ine huwandu hwakabudirira hwekusangana, Mac Otakara inzvimbo yakatendeseka uye, kunyangwe pasina 100% sosi yakavimbika, kana iyi nhepfenyuro yeJapan yakaburitsa pikicha ine 5 trays yeSIM mu5 mavara uye ipapo idema, tinogona kutanga kufunga nezve iyo nguva apo Apple inopa iyo iPhone 7 uye ichitiudza nezvekudzoka kwevatema kune yayo smartphone.
Iko kuderera kwekudonha uku ndekwevaya vaitarisira kuona iyo iPhone 7 mubhuruu kana Deep Blue. Sezviri pachena, chero munhu anofungidzirwa kuti akaona iro nyowani ruvara aive akarasika uye akarikanganisa nerima bhuruu kana muchokwadi iri yakasviba yakasviba kana grey. Semazuva ese, isu tinosimbisa iwo mufananidzo uri pamusoro uye mamwe akawanda makuhwa mune rinopfuura vhiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvinoenderana nemufananidzo uyu, iyo iPhone 7 ichasvika mu5 mavara
Hector Sanmej akadaro
Mumavhiki anodarika maviri chete? Ichave vhiki, hehe, mazuva masere chaiwo, kureva Chitatu chinotevera.
Pindura Héctor Sanmej
Mhoro Hector. Ndizvozvo. Kombamu yangu yaenda zvishoma ichitarisa pakarenda. Ndatenda nekunyora. Iye zvino ndinoigadzirisa 😉
Nyamavhuvhu 7 maawa anokosha
CustomNC inogadzirisa Notification Center interface